शुभ बिहानी??आज कार्तिक १९ गते बुधबार तपाईंको राशिफल पढी शे’यर ग’र्नुहोस। – " सुलभ खबर "
शुभ बिहानी??आज कार्तिक १९ गते बुधबार तपाईंको राशिफल पढी शे’यर ग’र्नुहोस।
सिंहः– प्रातकाल पश्चताप पूर्ण रहला । श्रमको मुल्य लिन सकिने छैन । सहयोग गर्दा उल्टो दोष पाईनेछ । आफन्तमा झै–झगडा पर्न सक्छ। व्यय मार्ग बढि खुल्ला देखिन्छ । आशाहरु निरासामा परिणत हुनसक्छन् । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । मध्यान्ह देखि समयमा सुधार आउनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् । व्यापार बढ्नेछ ।